Ukugembula kwamakhasino aku-inthanethi, ama-roulette, ama-blackjack nezinye eziningi
Ngokomthetho, ukugembula kuyizo zonke izinhlobo zama-lottery, imidlalo kanye nabathengisi bezimali ezikhiqiza ngokungenamkhawulo izinqobelo zabadlali. Ezimweni eziningi, ukuwina kukhonjwa ngenhlanhla. Noma kunjalo, kunemidlalo yokugembula esingayabela ngempumelelo iqembu lalabo amasu okubaluleke kakhulu kubo.
EPoland, ukugembula kulawulwa yi-19 Act kaNovemba 2009. Ngemuva kwalokho kwaba yisinqumo esibizwa ngokuthi i-Dz. I-2009.201.1540 ilawule ukugembula njengemidlalo yamathuba, ababhuki 'kanye nam lotto, kanye namathotho. EPoland, ngeshwa, ukugembula akukho emthethweni - njengakwamanye amazwe amaningi. Ngakolunye uhlangothi, amakhasino anemikhawulo eminingi - edolobheni lapho kuhlala khona izinkulungwane zabahlali be-200, amakhasino we-1 kuphela angasebenza ngokusemthethweni.
Asebenza kanjani amakhasino aku-inthanethi?
Abasunguli babo bafaka izicelo zezimvume emazweni lapho umthetho kanye nokuvinjwa kokugembula kungazange kusebenze khona. Okuthandwa kakhulu Malta - kulapho amakhasino afana neBetsson, Betsafe, CasinoEuro nabanye abaningi basungulwa khona.
Amandla kaMalta avumela ukugembula kwenziwe ngaphandle kokubeka amaketanga amakhulu entela yabathuthukisi bekhasino (kungenzeka futhi ukusetha amakhasino e-US, kepha izindleko zokuthola imvume ziphakeme kakhulu kosomabhizinisi abazobhekana nomthetho waseMelika).
Ake sibuyele ekuhlukaniseni ukugembula, isb. Ukuzijabulisa okuvumela ukuthi uzuze masisha (noma ulahlekelwe) imali enkulu. Ukuhlukaniswa kusekelwe kuhlobo lwe-gameplay kanye nemithetho yomdlalo.
Ethandwa kakhulu yilezi:
- Imidlalo yamakhadi - isibonelo poker
- Roulette - Inguqulo yaseYurophu neyaseMelika
- Isigebengu esisodwa - ethandwa kakhulu yi-Sizzling Hot Deluxe ne-Book of Ra
- Amakhadi okuqala
- Amathothali nemidlalo yezinombolo - ngokukhetha izinombolo nokudweba inhlanganisela yokuwina
Amasu okugembula Nokho, amakhasino aqhubekela phambili ngokushintsha ukugembula kwendabuko okuncane futhi akuhambise nezinhlobo zanamuhla. Kuyavunywa, ukusungula ku-poker, i-roulette noma iBlack Jack akuvamile - imidlalo yama-slot ivame ukuguqulwa. Ungamangali ngemidlalo esekwe kumamuvi weJurassic Park noma uchungechunge lweSouth Park TV. Abathuthukisi bezokugembula bazama ukufinyelela ukunambitheka komdlali ngamunye.
Ukwethulwa kwamakhasino aku-inthanethi bekuyinqubekela phambili nje. Kuze kube yiminyaka engamashumi amabili edlule, akekho owayecabanga ukuthi i-poker noma i-roulette ingadlalwa kusetshenziswa ikhompyutha (ingasaphathwa izingcingo noma amathebulethi). Namuhla kungukuphila kwansuku zonke okudala ukuncintisana okukhulu kwamakhasino asuselwa emhlabeni avela eLas Vegas nakwezinye izingxenye zomhlaba.